महाकाली सन्धि ‘ऐतिहासिक गल्ती’ थियो भनेर स्थायी कमिटीबाट निर्णय हुनुपर्ने वामदेवको माग – Sandesh Munch
महाकाली सन्धि ‘ऐतिहासिक गल्ती’ थियो भनेर स्थायी कमिटीबाट निर्णय हुनुपर्ने वामदेवको माग
June 27, 2020 117
काठमाडौँ — सत्तारुढ नेकपाका उपाध्यक्ष वामदेव गौतमले महाकाली सन्धि गल्ती थियो भनेर निर्णय गर्न माग गरेका छन् । प्रधानमन्त्री कार्यालय बालुवाटारमा जारी स्थायी कमिटी बैठकको तेस्रो दिन गौतमले २५ वर्ष अगाडि भारतसँग महाकाली सन्धि गर्नु गल्ती थियो भनेर पार्टीले निर्णय गर्नुपर्ने माग राखेका हुन् ।
स्थायी कमिटीको शनिबारको बैठकमा गौमतले महकाली सन्धिलाई लिएर तत्कालीन एमालेले आफूमाथि कारबाही गर्नु गल्ती थियो भनेर नेकपाले निर्णय गरेर न्याय दिनसमेत उनले माग गरेका छन् ।
महाकाली नदीको मुहान लिम्पियाधुरा हो भनेर प्रष्ट पार्नुपर्छ भन्दा आफूसहित १६ जनालाई पार्टीले कारबाही गरेको र त्यहीँ कारण पार्टी फुटेको गौतमको भनाइ थियो ।
‘महाकाली सन्धि गर्दा नदीको मुहान तय हुनुपर्छ भन्दा मसहित १६ जना कारबाहीमा पर्‍यौं । त्यही कारण पार्टी फुट्यो । त्यो ऐतिहासिक गल्ती थियो भनेर अहिले निर्णय गर्नुपर्‍यो र ममाथि न्याय गर्नुपर्‍ो,’ गौतमको भनाई उद्धत गर्दै एक नेताले बताए ।
२०५२ माघ २९ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र भारतीय प्रधानमन्त्री पीभी नरसिंह रावबीच महाकाली सन्धि भएको थियो । दुई देशका प्रधानमन्त्रीले हस्ताक्षर गरेको महाकाली सन्धि २०५३ साल असोज ४ गते सत्तारुढ कांग्रेस तथा प्रतिपक्षी एमालेको पूर्ण समर्थनमा संसद्को दुईतिहाई मतका आधारमा पारित भएको थियो ।
शारदा बाँध, टनकपुर बाँध र पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय परियोजनालाई एकीकृत रूपमा विकास गर्ने गरी भएको द्विदेशीय यो सम्झौताले नेपालको राजनीतिमा त्यतिबेला तरंग पैदा गरेको थियो । १२ धारामा समेटिएको यो सन्धि बराबरीको सिद्धान्तअनुसार गरिएको भनिएको थियो ।
सन्धिलाई लिएर तत्कालीन एमालेमा अन्तरविरोध बढ्दै गएपछि २०५४ फागुन २१ गते पार्टी विभाजन भएको थियो ।
महाकाली सन्धिको विपक्षमा रहेका गौतमले पार्टी फुटाएर नेकपा माले गठन गरेका थिए । तत्कालीन एमाले नेता केपी शर्मा ओली र माधवकुमार नेपाल उक्त सन्धिको पक्षमा थिए ।
नेपाल र भारतबीच भएको यो असमान सन्धिको विषय पटक–पटक कुरा उठे पनि अहिलेसम्म पूर्णतः कार्यान्वयन भने हुन सकेको छैन । महाकाली सन्धि १०-१० वर्षमा पुनर्विचार गर्ने भनिए पनि अहिलेसम्म एकपटक पनि भएको छैन ।
महाकाली सन्धिमा नेपाललाई घाटा भएको र त्यतिबेला उक्त सन्धि गरेर तत्कालीन दलहरूले राष्ट्रघात गरेको कुरा लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालपानी क्षेत्र समेटिएको नक्सालाई नेपालको निसान छापमा समेट्ने गरी जेठ ३१ गते प्रतिनिधिसभामा संविधान संशोधनसम्बन्धी विधेयकमाथि छलफल हुँदा उठेको थियो ।
समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले महाकाली सन्धिमा तत्कालिन कांग्रेस र एमाले नेतृत्वमाथि प्रश्न उठाएका थिए ।
यादवले महाकाली सन्धीले देशलाई पछाडि धकेल्ने काम गरेको बताएका थिए । उनले महाकाली सन्धि गरेर राष्ट्रको अहित गरेको भन्दै देश र जनतासँग तत्कालीन नेतृत्वले माफी माग्नु पर्ने माग गरेका थिए ।
राजपाका नेता राजेन्द्र महतोले महाकाली सन्धि गर्ने राष्ट्रिघाती भएको भन्दै उनीहरूलाई पर्दाफास गर्न माग गरेका थिए ।
नेकपा स्थायी कमिटी बैठक १६ गतेसम्म स्थगित, तेस्रो दिन पनि सीमा विवादमा छलफल
Prevहेर्नुहोस रोचक खबर आन्तरिक उडान कहिले खुल्छ ?
Nextसरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा अरनिको राजमार्ग सडकखण्ड अन्तर्गत सूर्यविनायक–धुलिखेलसम्मको करिब १२ किलोमिटर सडक विस्तारका लागि १ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ ।
दिपा श्री निरौलाले अभिभाबक खोज्दा तुच्छ गालि गलौंज किन सुन्नुपर्यो ?
कोरोना भाइरस (कोभिड-१९) संक्रमणका कारण काठमाडौंमा थप एकजनाको मृत्यु भएको छ ।
अछाममा मृ’तकको संख्या ६ पुग्यो, १७ बेपत्ता
आजदेखि फोन गर्दा पैसा लाग्दैन ! जिरो ब्यालेन्समा फेसबुक चलाउन र युट्युब हेर्न पनि मिल्ने (83652)
दुखद समाचार ! आखिर किन गरे त पारसले आत्मा हत्या ? (27391)
अत्यन्तै दु:खद खबर : भर्खरै कोरोनाको कारण दक्षिण अफ्रिकामा नवजात शिशुको मृ’त्यु ! RIP !!!! (13228)
भर्खरै कतारबाट आयो निक्कै ठुलो दुखको खबर, के भयो तेस्तो ? Watch Video (12464)
खुशीको खबर! बल्ल कोरना भाइरसको औषधी चीनले नै पत्ता लगायो ! (12160)
खुशीको खबर ! अमेरिकाले निकालेको औषधीले बिरामी चट्ट निको भएको हुदा पुरा अमेरिका खुशीको सिमा छैन हेर्नुहोस (11873)
अमेरिकामा कोभिड-१९ को खोप वितरण गर्न सेना परिचालन गरिँदै (11407)
दुखद खबर! सुत्केरीको मृत्यु भएपछि धुलिखेल अस्पतालमा सतर्कता! (10170)
खुशीको खबर! बल्ल कोरना भाइरसको औषधी चीनले नै पत्ता लगायो ! (9792)
फेरी नेपालमा आइसोलेशनमा राखिएका २२ बर्षीय युवकको मृ-त्यु (9612)
पाथिभरा माताको दर्शनगरी आज – ०९ कार्तिक आइतबारको राशिफल पढ्नुहोस्